Airlines demand hard cash for Zimbabwe ticket sales - ch-aviation
Air Zimbabwe Boeing B767-200 © Aldo Bidini
Local state-owned carrier Air Zimbabwe has also been affected with several aircraft currently grounded as they await the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) to disburse the necessary funds needed to procure spare parts. Given the capacity shortage, aircraft have had to be wet-leased in Air Zimbabwe Chief Executive Officer Ripton Muzenda told The Herald newspaper this week.
Zimbabwe's already lingering foreign currency shortage has worsened since near centenarian president Robert Mugabe and his ZANU-PF government announced the introduction of a quasi-currency late last year. Under the programme, the RBZ has issued "Bond Notes" which have been given 1:1 parity value to their US Dollar equivalents. However, instead of ameliorating the situation, the introduction of the notes has only exacerbated the shortage of hard currency given the local populace's past experiences with world-record hyperinflation and the now deprecated Zimbabwe Dollar.
Harare open to all forms of investment in Air Zimbabwe